10 Mpanao mofo tsara indrindra To Try In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Mpanao mofo tsara indrindra To Try In Eoropa
Fotoana famakiana: 6 minitra(Last Nohavaozina: 07/06/2020)
Mpandeha miaraka amin'ny hanitra nify, Tandremo tsara! Mety tsy nieritreritra ny namakivaky Eoropa fotsiny noho ny miezaka avy tsindrin-tsakafo, fa ianao dia tokony. Eoropa manana mahafinaritra izay hanim-py ho entiko ho akaiky kokoa ny kolontsaina eo amin'ny firenena ianao trandrahana. Plus, Ho faly izy ireo ny tsimon'ny tsiro. Inona no tsy ho tia?
Raha toa ny hevitra mahaliana ampy miezaka sy manontany tena ianao hoe aiza no hanombohana, aza tezitra. Mba hanampy anao hanapa-kevitra, dia efa nanangona hanitra lisitra ny 10 Mpanao mofo tsara indrindra mba miezaka eo amin'ny nankany Eoropa. Ndeha isika hijery azy ireo akaiky kokoa:
1. Amsterdam, The Pays-Bas - My Little PATISSERIE
Tena tsy fahita firy ny hihaona tsara vita Anarana iombonana amin'ny hanim-piny any amin'ny firenena hafa, fa tsy misy ahiahy - ny mpanao mofo dia frantsay. My Little PATISSERIE manome mamy isan-karazany nahafinaritra nify frantsay, anisan'izany ny chouquettes sy ny eclairs, amin'ny hafa specialties.
Miaraka amin'ny nentim-paharazana famolavolana frantsay, My Little PATISSERIE tsara ahafahanao mamoaka ny fanahin'ny Frantsa ao amin'ny Holandey toerana. Inona koa, izy ireo ihany koa ny mampiasa ny nentim-paharazana izay tsy frantsay fomba fanamboarana tsy fahafaham-po ny filan-dratsiny. Tandremo sao tsy mahita ity toerana ity raha mahita ny tenanao amin'ny Amsterdam!
2. Roma, Italy - Fivarotana mofo House
Ity fanaova-mofo iray hafa toa trondro-avy-of-drano zava-misy, tsy tahaka ny rehetra mikasika ny Italiana mofomamy. fa tsy, toerana fanaova-mofo House specializes amin'ny mofomamy kely, ny toerana tena famoronana Amerikana tanteraka izay mety ho tena matsiro ianao dia tsy te-hiala.
Ny zavatra tsara indrindra momba ny Fivarotana mofo tranony dia isan-karazany ny tsirony, raha kely indrindra izay misy ny miahiahy ny tsimon'ny tsiro. Fa satria izany ihany no azo atao mba hanandrana mofomamy kely iray, ny amoron-dranomasina dia tsy tena misaotra anao. Na izany aza, Mety ho ireo mofomamy kely mendrika mandany ora vitsivitsy fanampiny ao amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena mba handoro eny ny kaloria.
Raha toa ianao noho ny alahelonao tanteraka Italiana tsindrin-tsakafo, Biscottificio Innocenti tsy handiso fanantenana anao. Ny tena mendrika ny toerana eo amin'ny 10 Mpanao mofo tsara indrindra mba miezaka eo amin'ny nankany Eoropa noho ny biscotti. Izy io dia fivarotana kely misy lafaoro lehibe izay mamokatra biscuits matsiro matsiro ianao andramo any Italia.
Ary dia tsy hahita azy ireo Ny Fomba Ahitana ny na aiza na aiza - Biscottificio foana ny zava-miafina. Ho azo antoka ny sample ny Brutti Ma Buoni. Izany dia toy ny biscuit miendrika piramida fa tsy ho tratry ny ananany ampy ny.
4. Paris, France - mofo sy sasany Hevitra
Ny anaran 'ilay fanaova-mofo Paris izay ahitana fitambaran mahafinaritra adika toy ny Mofo sy Ideas, izay dia anarana ara-tsindrimandry ho an'ny manentana ny fanahy sakafo. Ary raha mbola ny anarany dia midika hoe specialization amin'ny mofo, izany tsy izay rehetra ateriny.
Azonao atao ihany koa ny mankafy ny croissants! Ireo entana mofo manana ny malaza ho tsara indrindra ao Paris croissants. Rehefa in Paris, aza malahelo iray amin'ireo tsara indrindra mpivaro-mofo any Eoropa.
5. Munich, Alemaina - samy maka izay tiany Coffee Fast
Ny vahoakan 'i Munich tia ny mofomamy, ary izany no hita avy amin'ny manaja ananany ho Konditorei Kaffee Schneller. Fa nahoana no iray amin'ireo 10 Mpanao mofo tsara indrindra To Try amin'ny Trip To Eoropa?
Rehefa avy trudge amin'ny alalan'ny dreadfully somebiseby erỳ, maloka sy mandreraka Alatsinainy, mila zavatra mba hampitraka ny fanahy. Raha toa ianao ao Munich, ny valiny dia miankina amin'ny matsiro, homemade mofomamy. Afaka findthose amin'ny kafe Haingana kokoa, miaraka amin'ny mampahery mafana kapoaky ny cappuccino na kakaô. Matetika no, dia tsy mila fialan-tsiny mba hitsidika azy mihitsy.
6. Zurich, Soisa - Conditorei Schober
Zurich no raikitra toerana mba hitady ny tsara indrindra mpivaro-mofo any Eoropa. Soisa manana lehibe sôkôla ary na dia tsara kokoa mofomamy mpanao asa tanana izay manaitra anao tokoa. Conditorei Schober dia iray amin'ireo mpivaro-mofo ianao dia afaka mahita ao amin'ny "mamy zorony" ny Old Town.
Tena nentim-paharazana tarehy Cafe kely izay manana ny sasany amin'ireo tena mahagaga mofomamy sy ny tanana sôkôla dia afaka manandrana. lovely Decor, lehibe tsindrin-tsakafo, ary ny Patio ho mankafy amin'ny fahavaratra - inona no tsy ho tia?
7. Zurich, Soisa - Confiserie Sprungli
Tsy nanao isika tamin'ny mbola Zurich! Misy toerana iray hafa tokony ho lazaina amin'ny lisitry ny mpivaro-mofo tsara indrindra any Eoropa. Heverina ho ny prettiest kafe tao an-tanàna, Confiserie Sprungli dia tena malaza any Zurich.
Ny manokana izay nahatonga azy ireo malaza dia ny Luxemburgli macaroons, fa ny sôkôla dia mahafinaritra ihany koa. Ny specialties Azo antoka fa hanao izay rehetra ianareo hisaina tsara mihira. Tsy afaka mitsidika ny Confiserie Sprungli tsy miezaka ny Luxemburgli macarons!
8. Danoà fanaova-mofo - Kaffehuset - Copenhagen, Danemark
Tsy afaka milaza mofomamy tsy misy mahay manaiky ny fomba ny Danoà no afa-manao izany. Izany no mahatonga izany tsy mahagaga ny mahita ny Danoà fanaova-mofo avy any Copenhagen any amin'ny mpivaro-mofo tsara indrindra any Eoropa. Ny Kaffehuset dia teny ka hiady ny toerana, ary handresy azy noho am-bavany-manondraka mofomamy.
ny mpianatra ny Copenhagen ny fitia Kaffehuset cheesecake, izany no ahalalan'ny ho ny tena mahafinaritra sy matsiro indrindra cheesecake in tanàna. Afaka miezaka ny hanohitra ny fitaoman'ity, fa ianao tsy tena mety - ary ho tena faly fa nataonao.
Iray hafa avy-of-France eoropeanina fanaova-mofo izay nanao ny anarany eo amin'ny mamy mahafinaritra frantsay, Lauderee dia enchant anao. Londres mankafy ity toerana ity, ary ianao koa ho indray mandeha ianao hitsidika London voalohany.
Macarons dia ny manokana, ary dia tsy ho afaka ny milaza azy ireo afa-tsy ireo mitovy frantsay. Ny fanosotra ao anatin'ny macaron dia ketraka ao am-bavanao handimby anao crunch ny miloko tanora-miloko akorany. Tsy hahazo misy tsara noho ny!
10. Vienna, Aotrisy - Demel
Demel dia malaza fananganana tsindrin-tsakafo any Vienne ho antony - ny mofo. Ny Ana Demal Torte dia ahitana ambaratonga sokola showstopper izay no iray amin'ny antony lehibe tonga lafatra Demel laza.
Demel dia fotsiny ny mpizaha tany amin'ny toerana tena - ny tantarany dia ny 230 taona ela, izay mahavariana sy mahatalanjona. Ny sasany amin'ireo specialties ianao dia afaka mankafy misy Walnut mofomamy, Esterhazy mofomamy, Sachertorte, ary Dobos mofomamy. Raha afohezina, raha tadiavinao isan'andro fatra ny mofomamy, mijery intsony noho Demel.
Vonona ny manana tsy hay hadinoina (ary matsiro) vakansy miaraka amin'ny fianakaviana manontolo? Tsidiho ny folo tsara indrindra any Eoropa mpivaro-mofo avy amin'ny lisitra, ary ianao ho hitsofana lasa. Ataovy azo antoka ny hanaovana drafitra ny fialan-tsasatra sy ny boky ny saran-dalana ara-potoana!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “10 Mpanao mofo tsara indrindra To Try amin'ny Trip To Eoropa ” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F10-best-bakeries-europe%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#bakeries #bakery #deserts #mofomamy London travelamsterdam travelaustria travelfrance travelgermany travelnetherlands travelswitzerland